प्रश्नमा उपेन्द्रकाे दिल्ली भ्रमण, के सरकार बारे छलफल हुन्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रश्नमा उपेन्द्रकाे दिल्ली भ्रमण, के सरकार बारे छलफल हुन्छ ?
प्रश्नमा उपेन्द्रकाे दिल्ली भ्रमण, के सरकार बारे छलफल हुन्छ ?
मंसिर २ गते, २०७६ - १५:२८
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव सोमबार दिल्लीको लागि निस्किएका छन् । पार्टीको संघीय परिषद् एवम् केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएलगत्तै उनी साताव्यापी भ्रमणका लागि भारत निस्किएका हुन् ।
मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले औषधी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन उनी भारत जान लागेको जानकारी दिएका छन् । यद्यपी तीनदिने कार्यक्रमका लागि साताव्यापी भ्रमणमा निस्किएका यादव कार्यक्रमका लागि भन्दा राजनीतिक भ्रमणमा निस्किएको आंकलन गपरिएको छ ।
सरकार बारे छलफल हुने सम्भावना
सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने बहस पार्टीभित्र चुलिएको बेला यादवले दिल्ली भ्रमणमा निष्कर्ष निकाल्न सक्ने आकंलन गरिएको छ । सरकारमा रहने कि नरहने विषयमा यसअघि भएको संघीय परिषद र केन्द्रिय समितिको बैठकले पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तथापी पदाधीकारी बैठक नबस्दै यादव दिल्ली उडेका हुन् । उनले सरकारमा रहने नरहने विषयमा दिल्लीको सुझाव लिन सक्नेछन् ।
राजपासँगको एकता निष्कर्ष पु-याउने
दिल्लीमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँगको एकता प्रक्रियाबारे पनि छलफल हुनसक्नेछ । कतिपय कुराहरु मिल्न नसक्दा राजपासँगको एकता प्रक्रिया लम्बिदैँ गएको छ । पार्टीभित्रकै कतिपय नेता राजपासँग तत्कालै एकता नगर्ने पक्षमा पनि छन् ।
राजपाले सरकारबाट बाहिरिए मात्रै एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सर्त राख्दै आएको छ । राजपाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने र संविधान संशोधनको एजेण्डालाई अगाडि बढाउनु पर्ने स्पष्ट अडान लिँदै आएको छ ।
भारतले पनि संविधान प्रति आफ्नो असन्तुष्टी राख्दै आएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै मधेशवादी मानिने दलहरुलाई आन्दोलन गर्न उस्काउने र नाकाबान्दी गरेको आरोप भारतीय पक्षमाथि छ । ओली नेतृत्वसँग भारतको सम्बन्ध नराम्रो रहेको बताईरहँदा नयाँ रणनीति बनाउन यादव भारत लागेको कतिपयको तर्क छ ।
मंसिर २ गते, २०७६ - १५:२८ मा प्रकाशित